Rano Cetilistat (282526-98-1) mpanamboatra - Phcoker Chemical
SKU: 282526-98-1 Sokajy: Weight Loss
Rohibe Cetilistat vovoka (282526-98-1) video
Rano Cetilistat roat (282526-98-1) Description
Ny vovony Cetilistat Raw dia novosirin'ny Alizyme ho fanafody fanindroany sy diabeta ary aretina hafa. Miasa amin'ny fampihenana ny lopase amin'ny pancreatic izy io, ny enzyme izay mamono triglycerides ao amin'ny tsena. Manamaivana siramamy (triglyceride) amin'ny sakafo tsy ho metabolised ary miova ho asidra maitso maimaim-poana izay azo tsaboin'ny vatana. Ny voam-bary vita amin'ny Cetilistat dia nihena nihena ny lanjany ary nohajaina kokoa noho ny orlistat.
Rano Cetilistat roat (282526-98-1) Taratasy
Product Name Rano Cetilistat pohe
Anarana simika Rano Cetilistat roja (Alt-962); Xinliorlistat; Rohibe Cetilistat rohe (282526-98-1)
Brand Name Cametor na Oblean
Drug Class Fanafody fitsaboana
molekiolan'ny Formula C25H39NO3
molekiolan'ny Wvalo 401.58
mitsonika Point 72.0 hatramin'ny 76.0 ° C
Color Fotsy tsy fotsy
Solubility Votoatin'ny DMSO, fa tsy anaty rano
Application Ampiasao ny fahasalamana amin'ny aretina
Cetilistat, fantatra amin'ny anarana hoe ATL-962 ihany koa, dia manintona ny pancreatic lipase izay novolavolan'i Alizyme ho fitsaboana ny karazana fiterahana sy ny fiaraha-miombon'antoka, toy ny diabeta 2. Manao toy izany koa ilay dokotera orlistat (Xenical) matihanina amin'ny alàlan'ny fanabarena ny lopase pancreatic, ny enzyme izay manimba triglycerides ao amin'ny tsinay. Raha tsy misy io biby io, dia tsy afaka ny hodiovina amin'ny asidra matavy be loatra ny triglycerides avy amin'ny fihinanana sakafo, ary tsy voavonjy. Io fanafody io dia tokony horaisina miaraka amin'ny sakafo matavy be volo ary be dia be ny fanatanjahan-tena mba hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra.
Nandritra ny fisedrana olombelona, ​​ny voly catechistate dia naseho tamin'ny famokarana lanja mitovy amin'ny orlistat, nefa koa namokatra fiantraikany toy izany, toy ny fôsily, ny trano fialofana, ny tsy firaharahiana, ny fikolokoloana matetika ary ny fivalanana. Azo inoana fa hampihatra ny fitsaboana mitovy amin'izany ny fitsaboana vitaminina matavy be loatra sy ny hafaingan-tsakafo hafa matavy loatra, ka mila vitaminina fanampiny azo ampiasaina mba hisorohana ny tsy fahampiana.
Ny Cetilistat powedr dia nankatoavin'ny Pharmaceuticals Medical Devices Agency of Japan (PMDA) tamin'ny Septambra 20, 2013. Noforonin'i Norgine sy Takeda izany, ary avy eo dia nividy azy ho Takelaka Oblean® avy amin'i Takeda any Japon.
Cetilistat vovoka (282526-98-1) Mechanism of Action
Ny vovoka Cetilistat dia vovoka lany maina ampiasaina miaraka amin'ny sakafo ambany kaloria. Ny Cetilistat dia singa mpitrandrahana gastrointestinal, dia miasa amin'ny fanakanana sombin-tsakafo betsaka avy amin'ny fanivanana sy ny fitsaboana ao amin'ny vatana. Ity vovoka lozam-pangozana ity dia sokajiana ho toy ny lipase inhibitor ary miasa mivantana eo amin'ny rafi-pandaminana ny digestive izay manakana ny hetsiky ny enzyme lipolytika antsoina hoe lipase. Ireo lipase ireo no ampiasain'ny vatana mba handevon-kanina ny fatiny. Na izany aza, rehefa manara-maso io fitsaboana io miaraka amin'ny sakafo dia mifatotra amin'ny lipase izany, ka manakana azy ireo tsy ho tapaka ny taviny. Ny menaka tsy tsy misy rano dia alaina amin'ny alàlan'ny vatany, ka miteraka fihenan-tsakafon'ny tavy ary mampihena ny fiterahana. Rehefa ampiarahina miaraka amin'ny fihinanana kalorie kalitao, dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny lanjany izany ary mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny marary be marenina mba hiverenana amin'ny endrika, ka hanatsara ny fahombiazan'ny fahavoazana mahomby. Ny fomba fampiasany dia mitovy amin'ny poids orlistat taloha amin'ny fanabarena ny lopase pancreatic.
soa ny voly Cetilistat (282526-98-1)
▪ Fikarakarana ny matavy
▪ Fanamafisana ny lanjan'ny vatana
▪ Ny fitsaboana ny diabeta
▪ Milefitra raha oharina amin'ny zava-mahadomelina hafa
Vovobony Cetilistat Recommended (282526-98-1) Dosage
Ny poety Cetilistat dia misy takelaka ho an'ny fampiasana am-bava, misy 120 mg ny Cetilistat maimaim-poana. Ny dosie nomerika dia 120 mg intelo isan'andro isa-maraina aorian'ny sakafo tsirairay. Ny fanafody dia entina amin'ny sakafo mba hahazoana antoka fa afaka miasa izy raha mihinana ny sakafo, mba ho azo tsinontsinoavina ny fihenan-tsakafo avy amin'ny sakafo.
Side effects ny voly Cetilistat (282526-98-1)
Ny marary azo ampiasaina amin'ny vatana amin'ny taratra Cetilistat dia mety ho voan'ny aretina hafa. Tsy maintsy ampahafantarinao ny dokotera raha mitranga izany. Misy ny fiantraikany amin'ny fampahalalana sasany:
▲ Matavy anaty kodiarana
▲ Flatus miaraka amin'ny tsiranoka
▲ Ny tsy fisian'ny tsinay
▲ Baolina kitra
▲ Sakafo mama
▲ Ny fihenan'ny nasalava
▲ Fanapahan-kevitra matetika
▲ Ny fangirifiriana ao an-kibo
▲ Miala tsiny na mamo
▲ Ireto ny fo mamitaka
▲ Reraka mahatsiravina na fahalemena
Na dia heverina ho mahazatra kokoa aza ny fanehoan-kevitra malemy, dia mety hitranga ihany koa ny trangan-javatra mampidi-doza. Tsidiho avy hatrany ny dokotera raha tokony hitranga izany.
Nahoana i Sibutramine no malaza amin'ny fihenam-bidy?
Fiterahana: Epidemiology, Pathophysiology, ary Prevention, Debasis Bagchi, Harry G. Preuss, pejy 205-2012.
Sibutramine HCL: Obesity, W. Philip James, Eleanor Bull, Ian Campbell, CSF Medical Communications, 2004, pejy 1-44
Fitsipika momba ny fitsaboana: Fitantanana ny zava-mahadomelina sy ny aretina, Richard A. Helms, David J. Quan, toko 57.
Rohamena 1,3-dimethylbutylamine (108-09-8)
Row 1,3-Dimethylbutylamin (1,3-DMBA), na ny dimethylbutylamine tsotra (DMBA), dia zava-mahadomelina manaitaitra ...... ..
fahafahana: 1490kg / volana
Rano nikotinamide mononucleotide (NMN) poids (1094-61-7)
Ny voankazo nokotinamide (NMN) voankazo mononucleotide (NMN) dia nampihena ny fahazoana mavesatra ny vatan'ny rongony ...
fahafahana: 1370kg / volana
Rano Tianptine roahin-jiro monohydrate (1224690-84-9)
Ny Sulfate Tianeptine, izay antsoina ihany koa hoe hodi-pototra monohydrate Raw Tianeptine, dia ......
fahafahana: 1350kg / volana